China Karọt rụpụta na Factory | Nongchuanggang
Nkọwa nkọwa nke karọt: Odika. 5-7 karọt kwa 1kg - mana ọnụọgụgụ nwere ike ịdị iche. Enwere ike iri karọt dị ka nri, ma ọ bụ sie ya ma jiri ya sie nri na ụfọdụ nri ụtọ, dị ka achicha karọt ma ọ bụ muffins. Enwere ike sie ha, sie ha, sie ha, sie ha, rie ha eghe, ghee ha eghe ma ọ bụ microwaved. A ga-esi nri karọt ruo mgbe ha ga-adị nro mana ọ ga-adị ntakịrị ntakịrị. Ma ọ bụ sie karọt ruo mgbe ha ga-adị nro ma mee ka ọ dị ọcha. Carrot bụ mkpụrụ akụ na-enweta nri nke vitamin a, site na beta-carotene. Otu karọt na-ebufe karịa nri ndị a tụrụ aro maka otu ụbọchị. Carọt bụkwa isi iyi nke eriri nri, vitamin c na niacin.
Carotene na karọt bụ isi ihe na-enye vitamin A, na vitamin A nwere ike ịkwalite uto, gbochie ọrịa nje, ma kpuchido anụ ahụ epidermal, akụkụ iku ume, akụkụ nri, usoro urinary na sel epithelial ndị ọzọ. Enweghi vitamin A ga-ebute xerosis conjunctival, ìsì anya nke abalị, cataract, wdg, yana atrophy nke akwara na akụkụ dị n’ime, mmebi agụrụ na ọrịa ndị ọzọ. Maka onye toro eto, oriri nke vitamin A na-eru nkeji 2200, iji kwado ọrụ ndụ nkịtị. Ọ nwere ọrụ nke igbochi kansa, bụ nke kachasị na ọ bụ eziokwu na enwere ike ịgbanwe carotene n'ime vitamin A na ahụ mmadụ.
Typedị ngwaahịa Achịcha anaghị edozi
Dị iche iche Karọt
Agba uhie uhie
Nha (cm) 18
Nọmba nlereanya karọt
Aha ngwaahịa Karọt ọhụrụ nke China
Akuku 2020 Kacha ọhụrụ Akuku
Agba Oroma Uhie
Mbukota 8kg / 9kg / 10kg / 20Kg katọn
Ire Na-atọ ụtọ
Inye oge Afọ Afọ
Njirimara Nnukwu Vitamin
Nke gara aga: Karọt akpịrị ịkpọ nkụ
Osote: Mkpụrụ osisi friji